नेप्सेमा तिब्र उतार चढाब, अर्थमन्त्री कायम रहने संकेत अब के हुन्छ ? « Sansar News
नेप्सेमा तिब्र उतार चढाब, अर्थमन्त्री कायम रहने संकेत अब के हुन्छ ?
१५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १२:१३
१५ फागुन काठमाडौं । पछिल्लो २ हप्ता तिब्र गतिले बढेको नेप्सेमा आज सातको अन्तिम दिन तिब्र उतार चढाब देखिएको छ । मार्केट खुल्दा हौसिएको सेयरबजार सुरुवातमा १६०० को हाराहारीमा देखिएको थियो । त्यसको १० मिनेट पछाडी सेयर बजार ४० अंकले घटेर पुनः १६१० मा पुगेको थियो ।
“अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा वाहिरिने हल्ला चलेसंगै सेयरबजार ह्वत्तै बढेको जस्तो देखिएको थियो ।”
जानकारहरुका अनुसार बजारमा सामान्य उतार चढाब स्वभाबिक भए पनि ५०, ६० अंकको उतारचढाब अस्वभाविक हो । पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा वाहिरिने हल्ला चलेसंगै सेयरबजार ह्वत्तै बढेको जस्तो देखिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली खतिवडालाई निरन्तरता दिने अडान लिएको कुरा बाहिरिए पछि बजारमा तिब्र उतरचढाब देखिएको छ ।
एक बिमा कम्पनीका पूर्ब सिईओका कुरा मान्ने हो भने अर्थमन्त्री युबराज खतिवडाले निरन्तरता पाएमा सेयर मार्केट १ हजारको हाराहारीमा पुग्ने निस्चित छ । हुन पनि बिगत २ हप्ताका गथतिबिधिले त्यस्तै देखाईरहेको छ ।
जब राजनिति अस्थिर हुन्छ तब सेयर कारोबार मापक नेप्से ह्वात्तै बढ्छ र जब राजनिती स्थिर हुन्छ सेयरकारोबार नेप्से पनि ओरालो लाग्छ ।
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार घरजग्गा कारोबार र सेकेण्डरी मार्केटको सेयर कारोबार राज्यलाई केहि फाईदा हुँदैन । अर्थमन्त्रीमा अर्थशास्त्री यूवराज खतिवडा आउँदा सोहि हल्लाका कारण परिसुच ओरालो लागेको सेयर विश्लेसकहरुको भनाइ रहेको छ ।